Isi Iyi: Ndepụta oku di omimi maka ụlọ ọrụ gị | Martech Zone
Anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na-arụ ọrụ na nsogbu na-aga n'ihu bụ mgbe ọ bụla otu esi achọpụta otu esi eduga n'ahịa ha. Ọ bụ ezie na ndị ọchụnta ego na ndị ahịa na-enyocha ma na-achọta ọtụtụ ụlọ ọrụ na ntanetị, ha na-eburu ekwentị mgbe ha chọrọ ịzụ ahịa.
Nsogbu bụ na anyị chọpụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbanwe anyị niile na-eme na ọzọ udi. Ha na-abanye nkebi ahịrịokwu dị mkpa, mana atụghị anya maka nsuso ahụ. Ohere inweta bụ na nke a bụ otu ihe na saịtị gị… e nwere ọtụtụ puku ma ọ bụ iri puku kwuru iri puku nke isiokwu n'ịgwa okporo ụzọ. Maka di na nwunye nke ndi ahia anyi, o kariri otutu puku onu ogugu!
Enweghi nọmba ekwentị iji soro nke ọ bụla, mana ọkaibe ike nọmba ekwentị ntinye sistemụ nwere ike n'ụzọ ziri ezi soro ya. Enwere ike ịtọ ọnụọgụ nọmba ekwentị ma gbanwee maka saịtị yana isiokwu otu. Nke a bụ ihe arụ ọrụ sistemụ dị ka SourceTrak site na IfbyPhone.
na Isi IyiTrak, younwere ike ịgbakwunye otu dị iche iche nke isiokwu ma gbanwee nọmba ekwentị. Usoro ahụ na-edebanye aha oku ma dekọọ otu isiokwu isiokwu kwesịrị ekwesị na oku ahụ bịara. Ọ bụ usoro dị mfe iji nwee ike inyere ụlọ ọrụ ọ bụla aka ịghọta ebe ụzọ ha si abịa.
Tags: oku na-esochiike nọmba ekwentị ntinyeifbyfoseo oku nsochiutoojoo